‘एउटा मजदुरले त दिनभर काम गरेपछि सा“झपख मूल्य पाउ“छ, हाम्रो त ज्यालाको पनि भर छैन । यसरी भोको पेटले कहिलेसम्म पत्रकारिता गर्ने ?’ पोखराका सञ्चारकर्मीले एक कार्यक्रममा शनिवार यस्तो दुःखेसो पोखेको कुरा सञ्चारमाध्यममै आयो । देशभरका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीको पारिश्रमिक निर्धारण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न गठित सरकारीस्तरको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ समक्ष पोखराका सञ्चारकर्मीले देखाएको यो पीडाले अझै पनि नेपाली पत्रकारितामा आर्थिक समृद्धिको आवश्यकता औँल्याएको छ । देशभर सञ्चारमाध्यमको वृद्धिसंगै सञ्चारकर्मीहरु बढेपनि यो पेशामा काम गर्नेहरुको ‘आर्थिक पीडा’ अझै घट्न सकेको रहेनछ भन्ने कुरा पोखरामा देखियो ।
०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि नेपाली पत्रकारिताको विकासमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । पछिल्लो दशक त अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गरेर नेपाली मिडियामा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम पनि भित्रिए । तर सञ्चारकर्मीका समस्या भने सुरुदेखि नै रह्यो । पत्रकारिता गरेर ‘जागिर’ पाएपनि ‘तलब’ नपाउने समस्याले पत्रकारहरुलाई पिरोल्यो । यही भएर दश वर्षअघि सञ्चारकर्मीका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी स्तरमा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ बन्यो । तत्कालीन समयमा समितिका अध्यक्ष सुरेश आचार्य थिए । आचार्यपछि सरकार परिवर्तनसंगै महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्र्य, यसका अध्यक्ष बने । अहिले समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारी छन् । आचार्यदेखि भण्डारीसम्मका अवधिमा समिति उत्तिकै सञ्चारकर्मीका सवालमा उत्तिकै क्रियाशिल छ, तर समस्या भने समाधान भएका छैनन् । समिति र पत्रकारहरुको छाता संगठनले सञ्चारकर्मीका समस्या समाधान गर्न सबैलाई नियुक्ती पत्र लिई महिनावारी तलब खाएर मात्रै पत्रकारिता गर्न भन्छ । यस्ता नियुक्ति पत्र कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् । व्यवहारमा लागु हुन सकेका छैनन् । त्यो पनि सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र बनाउने र पत्रकार महासंघको सदस्य बन्नका लागि मात्रै सञ्चारमाध्यमले जारी गर्ने ‘नियुक्ति पत्र’ का लागेको अवस्था छ । तैपनि सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, पारिश्रमिक निर्धारण समिति र पत्रकार महासंघले गर्ने सबैजसो कार्यक्रममा भने सञ्चारकर्मीका आवाज सधैं समस्याका रुपमा मात्रै प्रस्तुत भईंराखेका छन् । यसो हुनुका पछाडि सम्बन्धित निकायले राम्रोसंग मिडिया अनुगमन गर्न नसकेरै हो । यद्दपि यस्ता संस्थाले दशकसम्म गरेको प्रयास अझसम्म किनारा हुन नसक्नुका पछाडि सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मी आफै सक्षम र दक्ष नभएर पो हो कि भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । अझ पत्रकारितालाई इज्जत र प्रतिष्ठासंग मात्रै तुलना गरिदिनाले यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आर्थिक दक्षता बढ्न नसकेको भन्ने कुरामा अब अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । यसैले अब व्यवसायिक पत्रकारिताको विकासलाई नयाँ ढंगबाट सोँच्नुपर्ने बेला भईसक्यो ।
एक वर्षअघि सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढिकरण कसरी गर्न सकिन्छ’ भन्ने सन्दर्भमा ललितपुरमा जाइकाको सहयोगमा एक कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व अध्यक्ष एवम् पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष समेत भईसकेका सुरेश आचार्य पनि थिए । काठमाडौंमा एकजना सम्पादकसंग पत्रकारले पारिश्रमिक माग्दा ‘पत्रकारलाई जागिर र तलब दुवै दिन सकिन्न’ भनि सम्पादकले भनेको सन्दर्भलाई आचार्यले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीको फाइदा पत्रकारिता पनि यसरी भित्रिएको दशकअघिको यो घटनालाई आचार्यले यसरी व्याख्या गरे । जुन अझैसम्म पनि नेपाली पत्रकारितामा विद्यमान छ ।
एउटा बेरोजगार युवक रोजगारी पाएकै कारणले गदगद थियो । घरपरिवार, इष्टमित्र, साथीभाई उ ‘पत्रकार’ बनेकोमा गर्व गर्न थाले । पत्रिकामा उसको नाममा ‘वाइलाइन समाचार’ आयो । उसको खुशीको सिमै रहेन । दिन वित्यो । महिना वित्यो । सधै स्यावासीले मात्रै दिन चल्दो रहेनछ । पत्रिकामा आएको वाइलाइन समाचारले भोको पेट भरिंदो रहेनछ । सम्पादकले तलब दिने लक्षणै देखाएनन् । पछि वाध्य भएर बेरोजगार युवकबाट पत्रकार भएका उनले सम्पादकसंग दुःखको भारी विसाउँदै भने,‘ सम्पादकज्यू, पैसा चाहिएको थियो । घरमा साह्रै समस्या छ ।’ आफै प्रकाशक भएको पत्रिका छाप्न सम्पादकलाई धौ धौ थियो । तनाव वेग्लै थियो । अनि सम्पादकले जवाफ फर्काए,‘ तपाईलाई मैले पत्रकारको जागिर दिएको हो । मैले जागिर र तलब दुवै दिन सक्दिन महोदय ।’ पत्रकारलाई पिरलो प¥यो । सम्पादकले दिएको यो जवाफले अब पत्रकारलाई यो पत्रकारिता पेशा ‘नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ त कान्छा बाउको अनुहार’ भनेझैं लाग्यो ।
देशभर अहिले बग्रेल्ती खुलेका सञ्चारमाध्यमहरुमा ‘जागिर’ खाने सञ्चारकर्मीहरुको भीड छ । सम्वाददातादेखि सम्पादकसम्म भनेकै पदमा छानीछानी पद दिने सञ्चारमाध्यमहरुको कमी छैन । सञ्चारमाध्यमप्रतिको आकर्षण व्यवसायीदेखि राजनीतिज्ञ हुँदै सामाजिक कार्यकर्तासम्मकालाई छ । पैसा भईभई ‘रहर पत्रकारिता’ गर्नेहरुका लागि सञ्चारमाध्यमबाट पारिश्रमिक पाए पनि नपाए पनि कुनै मतलब हुने कुरै भएन । तर समाचार लेखेकै भरमा जिन्दगी गुजार्नेहरुका लागि भने यो पेशा अभिषाप बन्दै गएको छ । धेरैलाई सत्य तितो लाग्न सक्छ । सञ्चारकर्मी भएर मात्रै बाँच्न अबको समयमा गाह्रो भईसकेको अवस्था हो ।
सधैं काँचको पर्दाअगाडि ‘हामी निरन्तर न्यूजमा छौं.....’ भन्ने काठमाडौंको एक टेलिभिजन च्यानलका सञ्चारकर्मीहरु पछिल्लो समयमा ‘हामी तलबका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छौं......’ भन्न वाध्य छन् । अन्ततः टेलिभिजन प्रशासनले सञ्चारकर्मीहरुको माग पुरा गर्न नसकेपछि टेलिभिजनलाई प्राण भन्दा प्यारो ठानि वर्षौदेखि गुणगान गाइरहेकाहरु एकाएक पाखा लागे । कतिलाई त टेलिभिजन प्रशासनले पनि भन्दो हो,–‘हाम्रो काम जागिर दिने हो । तलब दिने होइन ।’ यतिमात्रै होइन, काठमाडौँका ब्रोडसिट आकारका दैनिक पत्रिकादेखि विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा पनि सञ्चारकर्मीको समस्या ‘तलब’ मै गएर अड्किन्छ । आफ्ना कामदारलाई तबल दिने कुरा त टाढाको विषय भयो, केही समयअघि दुईवटा राष्ट्रिय टेलिभिजन हाम्रै आँखा अगाडि केही समय बन्द भए । कारण थियो, स्याटेलाइट वापतको रकम तिर्न नसक्नु । यसले के देखाउँछ भने सञ्चारमाध्यमहरु प्राविधिक तयारीविना पनि खुल्दैछन् । समस्या थोपरिएपछि बन्द हुन बेर लाग्दैनन् ।
अझै पनि पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन दर्ता गर्न नेपालमा समस्या छैन । अति नै न्यूनतम शुल्कमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सकिन्छ । तर यसको ‘अपरेटिङ खर्च’ को हेक्का नहुँदा र यसप्रति गहन चिन्तन नगर्नाले धेरैलाई अन्यौलमा पारिदिएको छ । ‘मिडिया हाउस’ लाई नयाँ मान्छे काममा लगाउन गाह्रो छैन । मिडियामा काम गर्न पाएपछि आजका युवाहरु ‘रहर’ मै पत्रकारितामा प्रवेश गर्छन् । बढिमा दुई वर्ष जसोतसो काम गर्छन् । जब यो क्षेत्रमा केहि देख्दैनन्, अनि भाग्छन् । फेरि अर्को समूह उसैगरि पत्रकारितामा प्रवेश गर्छ । उनीहरुको पनि हविगत उही हुन्छ । यति भएपछि मिडिया मालिकहरुले पनि ‘यूज एण्ड थ्रो’ गर्न पाइहाले । श्रमजीवि पत्रकारका नाममा भजन गाउनेहरुलाई यस्ता कुरामा के मतलब ? यसका लागि त मिडियामा आउनेले धेरै कुरा सोँचेर आउन जरुरी छ, काम लगाउनेले पनि उसको स्थायित्वको सवाललाई बेलैमा नजरअन्दाज गर्न आवश्यक छ ।
यसो भन्दैमा नेपाली पत्रकारितामा समस्या मात्रै होइन, समाधान पनि छ । भएका सञ्चारमाध्यम जोगाउने र यो क्षेत्रमा काम गरिरहेकालाई टिकाउन ‘मिडिया संचालक’ ले अब वर्षदिन भरि आफ्नो मिडिया सञ्चालनको आधार प्रष्ट गर्न सक्नप¥यो । अब ‘आसे विज्ञापन’का भरमा मात्रै मिडिया चलाउनेका दैलामा श्रमजीवि पत्रकारले शुरुमै पाइला टेक्न हुँदैन । शुरुमै बुद्धि पु¥याइयो भने पछि दुःख पाइदैन । पत्रकारिता पढेर यसैमा जीवन समर्पित गर्छु भन्दै लागेका युवाहरु पनि छन् अहिले । विगतबाट पाठ सिक्दै उनीहरुको भावनामा ठेस पु¥याउन नदिन अब ‘पाका पत्रकार’ ले सोंच्नैपर्ने भएको छ । यससंगै नेपाली समाजले कति मिडिया थेग्न सक्छ भन्ने हिसाब गरेर मात्रै मिडिया सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । दर्ता भई सञ्चालनमा आइसकेका मिडियालाई सोझै बन्द गर्नुभन्दा ‘मिडिया मर्ज’ को नीति ल्याएर यसलाई टिकाउन सकिन्छ । अहिले संकटग्रस्त भएका सहकारी र बैंकहरुलाई सरकारले मर्ज गरेर सञ्चालन अनुमति दिएजस्तै नेपाली मिडियामा पनि यो ‘मर्ज नीति’ ल्याउन सके समस्यामा कमी आउने थियो । अनि पत्रकारले जागिर र तलब दुवै पाउने थिए । होइन भने सधैंभरि नेपाली पत्रकारहरु ‘पारिश्रमिक विनाको परिश्रम’ गर्न वाध्य भईरहने छन् । सञ्चारमाध्यम पनि ‘मूर्दामाथिको लाश’ झैं घिटिघिटि पाराले तुलसीको मोठ ढुकेर बसिरहनुपर्ने वाध्यता पर्ने छैन । अहिलेसम्म कागजमा सीमित ऐन कार्यान्वयन गर्न पेशागत संघ संगठनले पनि उत्तिकै आवाज उठाउनु जरुरी छ । यसो भनिरहँदो आफ्नो व्यवसायिक दक्षता बढाएर मात्रै सञ्चारकर्मी बन्न सकियो भने यो पेशामा टिक्न भने समस्या छैन ।
Source (Sancharpatra Daily)
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 3:01 PM2comments: Links to this post
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 12:35 PM3comments: Links to this post
व्यवस्थापन विवाद र बन्द बालकुमारी
वि.सं.२०२२ सालमा नारायणगढमा स्थापना भएको बालकुमारीको ‘स्कुले’ विद्यार्थी जीवन काटेको पनि दुई दशक पार हुन लाग्यो । बालकुमारीमा कक्षा १० पढ्दा हामी अरु विद्यार्थी भन्दा ‘पाका’ थियौं । किनभने उतिबेला त्यहाँ उच्च मावि थिएन । कक्षा ६ देखि १० सम्म मात्रै पढाई हुन्थ्यो । आफ्नो भन्दा माथिल्लो कक्षा स्कूलमा नभएको र तलका भाईबहिनी ‘प्यारा’ लाग्नु स्वाभाविकै हो । तल्ला कक्षाका विद्यार्थीलाई होच्याएर स्कुलमा अराजकता निम्त्याई विवाद गरेको कसैले कतैबाट थाहा पाइएन । बालकुमारी पढेकाहरु उतिबेला अधिकांश ‘घरानिया’ नै मानिन्थे । नारायणगढ भरतपुरका बजारियादेखि गाउँगाउँबाट बालकुमारी पढ्न आउनेको लस्कर लाग्थ्यो । विद्यार्थीको चापले ‘दरवार’ जस्तो लाग्ने बालकुमारीको ३ तले भवन पनि अपुग हुन्थ्यो । स्कुलले रजत जयन्ती मनाउँदा हामी कक्षा ७ का विद्यार्थी थियौं । रजत जयन्तीमा नारायणगढ बजार परिक्रमा गर्दा सारा नारायणगढ नै हाम्रो लाग्थ्यो । विद्यार्थीका सेता निला ड्रेसले हाम्रो बालकुमारीलाई ‘शान्तिको प्रतीक’ मान्थ्यो । वास्तवमा बालकुमारीमा पढ्नुको मज्जा बेग्लै थियो ।
कक्षा १० मै पढ्दाको कुरा हो । नारायणगढको गणेश चलचित्र मन्दिरमा ‘वक्त हमारा हे’ भन्ने हिन्दी फिल्म चल्यो । केही साथीहरु कक्षा छाडेरै ‘टिफिन’ पछि फिल्म हेर्न हलतिर लागे । उतिबेला कक्षामा हरेक शिक्षकले हरेक पिरियडमा विद्यार्थीको हाजिरी गर्नुपर्ने चलन थियो । ‘टिफिन’ पछि ‘सरस्वती मीस’ले नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँको पिरियडमा कक्षामा केही विद्यार्थी अनुपस्थित भएपछि चासो बढ्यो । कक्षामा साथीहरु को कहाँ गए भन्ने जानकारी कसैले गराएन । भोलिपल्ट कक्षामा विद्यार्थीहरु आए । ‘सरस्वती मीस’ को फेला परिहाले । उहाँले आफ्नै सुत्र लगाएर विद्यार्थीहरु ‘वक्त हमारा हे’ भन्ने फिल्म हेर्न गएको पत्ता लगाउनुभो । उहाँले कसैलाई केही गर्नुभएन । मात्र अघिल्लो दिन कक्षा छाडेर फिल्म हेर्न गएकाको आँखामा आँखा जुधाउँदै भन्नुभो,–‘वक्त किसका हे भाई ?’ उहाँको त्यो प्रश्नले ती विद्यार्थी साथीहरु लाजले रातापिरा भए । अनि कहिल्यै ती विद्यार्थी पढाइ छाडेर अरु बदमासी गरेको समेत पत्तो पाइएन । बाँकि विद्यार्थी पनि सजग भईहाले । हामीले पढ्दा ‘सरस्वती मीस’ को हातमा कहिल्यै लठ्ठी देखिएन । तर उहाँले गलत बाटोमा लाग्ने विद्यार्थीलाई दिने वचन चाहिँ वाण जस्तै तिखो हुन्थ्यो । जुन वाण कुलतमा लाग्ने विद्यार्थीका लागि सुखद सन्देश बन्थ्यो । कक्षामा हाजिरी रजिष्टर बोकेपनि नाम भनेपछि विद्यार्थीले ‘एस मीस’ भन्नुपर्थेन । किनभने एक मिनेट कक्षामा आँखा डुलाएकै आधारमा को विद्यार्थी आए नआएको उहाँलाई सम्झना हुन्थ्यो । वर्षौअघि आफूले पढाएको विद्यार्थीको नाम धेरैपछिसम्म उहाँलाई कण्ठ हुन्थ्यो । उहाँका सबै ‘चेलाचेली’ यस्ता कुराले उहाँप्रति अझैसम्म खुशी देखिन्छन् ।
समयक्रमसंगै ‘सरस्वती मीस’ अर्थात् सरस्वती रिजाल अहिले बालकुमारी उच्च माविकी प्राचार्य हुनुहुन्छ । बालकुमारीमा सेवा गर्ने उहाँको समय अब डेढ वर्षभन्दा बढि छैन । तर सरस्वतीको मन्दिर बालकुमारीमा पछिल्लो समय बेथिती बढिरहेको छ । व्यवस्थापन समिति निर्माणका क्रममा बनेको किचलोले यो मन्दिरलाई विजोग बनाइदिएको छ । गएको जेठ १३ गते कमल आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक आडमा कसैलाई मान्य र कसैलाई अमान्य भएपछि यसले निम्त्याएको विवादले अहिले उनै ‘सरस्वती मीस’को कार्यकक्षमा ताला लागेको छ । प्राचार्य बस्ने कुर्सी टेबल तोडफोड भएको छ । विद्यालयले पाएका सम्मान र पदकहरु भुईभरि टुक्राटुक्रा भएर छरिएका छन् । शैक्षिक सामग्रीमा समेत क्षती पुगेको छ । यो घटनाले प्राचार्य रिजाललाई ‘असक्षम र दुष्ट’ बनाइदिएको छ ।
व्यवस्थापन समितिको नाममा बालकुमारीमा बढिरहेको बेथिती साम्य पार्न एउटा प्राचार्यको प्रयास अझसम्म पनि सार्थक बन्न सकिरहेको छैन । किनभने प्राचार्यभन्दा माथि अघोषित रुपमा राजनीतिक दलहरुले यो मुद्धालाई उचालिदिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेत निरिह बनिरहेको छ । विद्यालयमा जेठ १३ गते बसेको अभिभावकहरुको भेलाले कमल आयार्यलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनायो । भेलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि समेत उपस्थित थिएन । अझ सबै राजनीतिक दल सम्बद्ध
अभिभावकहरु पनि सो भेलामा उपस्थित थिए । तर जसरी गठन भएपनि नेपाली कांग्रेससम्वद्ध ‘नेपाल विद्यार्थी संघ’लाई आचार्य अध्यक्ष भएको मन परेन । ‘खेताला अभिभावक’ ले आचार्यलाई नियमभन्दा बाहिर रही अध्यक्ष बनाएको भन्ने नेविसंघको आरोप रह्यो । यसलाई प्राचार्य रिजालले समेत ‘पिछलग्गु’ बनेर समर्थन गरेको उसले बतायो । यस्तो भेलाबाट बनेको अध्यक्षलाई ‘हामी मान्दैनौं’ भनेर प्रशान्त अधिकारी अध्यक्ष रहेको नेविसंघ क्षेत्र नं. ३ ले भनेपछि उसले पहिलो चरणमा यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राखी जेठ २२ गते ‘शैक्षिक गतिविधि प्रभावित नहुने’ गरी विद्यालयको लेखा र प्रशासन कक्षमा ताला लगायो । असार २८ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयमा गठन गरिएको व्यवस्थापन समिति नियमसम्मत भएको र बाँकि रिक्त सदस्यमा अन्यलाई मनोनित गरी समितिलाई पूर्णता दिन पत्राचार ग¥यो । तर बालकुमारीमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेविसंघ क्षेत्र नं.३ ले गत हप्ता विद्यालयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रशासन कक्ष तोडफोड ग¥यो । विज्ञप्तिलाई आधार मान्दा अनिल अधिकारी, रञ्जन पौडेल, नागेन्द्र पौडेल, सन्तोष लामा र निशान अर्याललाई नेविसंघले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पठाएको देखिन्छ । अहिले विद्यालयमा तोडफोड गरेरै भएपनि उनीहरुको आन्दोलनले ‘सफलता’ पाएको छ ।
आइतबार बालकुमारी पुग्दा सरस्वतीको मन्दिर तोडफोड भएको देखेर धेरैले नमज्जा मानिरहेका थिए । २२ वर्षसम्म व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भई विद्यालयलाई यो स्वरुपमा ल्याएका जवाहरलाल प्रधान पनि निकै निराश देखिन्थे । प्राचार्यको कोठामा ‘भोटे ताल्चा’ लगाएका थिए, नेविसंघका जवानहरुले । कोही भित्र नपसुन् भनेर । अनि ढोकैमा आफूहरुको पुरुषार्थ देखाउन ‘ताल्चा लगाउनुको कारण’ बताइएको थियो, आफ्नै लेटरप्याडमा । नेविसंघको सोही लेटरप्याडको सिरानमा महामानव विपी कोइरालाको भनाइ थियो, ‘शैक्षिक क्षेत्र बाहुबल प्रयोग गर्ने स्थल होइन, यो त सिद्धान्त र विचारको द्वन्द्वात्मक भूमी हो ।’ अनि यसैको तल आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अनिल अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आफूहरुलाई महामानव विपीको सच्चा अनुयायी ठान्नेहरुको हर्कतलाई त्यही ताल्चा लगाइएको कोठाको झ्यालबाट चियाउँदा सजिलै देखिने तोडफोडले गिज्याइरहेको थियो । स्कुलले पाएको सम्मान र पदक भुईमा छरपस्ट त्यो हर्कतबाट छट्पटाइरहेका थिए । भित्र थुनिएका शैक्षिक सामग्री विद्यार्थीको भविष्य देखेर रोएको थियो । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको त्यो ‘बाहुबल’बाट टेबल कुर्सीका सीसा झैं त्यो स्कूलमा पढिरहेका भाईबहिनीको भविष्य छियाछिया भएको संकेत दियो ।
अहिले बालकुमारीको शैक्षिक गतिविधि अवरोध नगर्ने भनि नेविसंघले लगाएको ताला यो पंक्ति लेखिरहँदा पनि खुलेको छैन । बालकुमारीले धेरै राम्रा विद्यार्थीहरु वर्षेनी उत्पादन गरिरहेको छ । एसएलसीमा नेपाल टप गरेकासम्म इतिहास बालकुमारीसंग छन् । डाक्टर, इन्जिनियर लगायत धेरै सामाजिक र राजनीतिक व्यक्तित्व उत्पादन गर्नमा बालकुमारीको योगदान महत्वूर्ण छ । यस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने क्रममा धेरै ‘नेविसंघ’मा आवद्ध विद्यार्थीहरु पनि बालकुमारीका उत्पादन हुन् । तर उनै ‘नेविसंघ’बाट बालकुमारी बन्द हुनु, तोडफोड हुनुलाई जायज मान्न सकिंदैन । शैक्षिक गतिविधि अवरोध नगर्ने भनि बन्द गरिएपनि यसबाट आउने परिणामले शैक्षिक गतिविधिलाई नविथोल्ला भन्न सकिन्न । एसएलसीको पुरक परीक्षाका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पठाउने फर्महरु बन्द कोठाभित्र थुनिएर बसेका छन् । प्राचार्य रिजालको कार्यकक्ष बन्द हुँदा यसले निम्त्याउने तनावले विद्यार्थीहरुमा समेत राम्रो शैक्षिक वातावरण पुग्न सकेको छैन । लेखा शाखा बन्द हुँदा शिक्षकहरुले तलब खान सकेका छैनन् । मरीमरी काम गर्ने शिक्षकले दाम नपाउँदा उसले गर्ने कामको बारे सम्बन्धित विथार्थीहरुले गम्भीर भएर सोंच्न जरुरी छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा विद्यालयको जुनसुकै क्षेत्र बन्द गरेर विद्यालयलाई ‘रणमैदान’ बनाइयो भने यो प्रकृया लम्विन सक्छ । सुनिदैंछ, यस्तो रणमैदान बनाउन राजनीतिक रङको आधारमा भूपू विद्यार्थीहरु समेत लागिपरेका छन् । यस्तै हो भने प्राचार्य सरस्वतीदेखि विद्याकी देवी सरस्वतीसम्मको श्राप लाग्नेछ । समस्यालाई ठूलो बनाउने भन्दा पनि समाधानतर्फ जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालीले जानेको सत्य कुरो के हो भने गत वर्षको मंसिर ११ गते सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा ग¥यो । विद्यालयमा राजनीति गरेर कुनैपनि बहानामा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित पार्न हुन्न भन्यो । यस्ता लिखित दस्तावेज जताततै छन् । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने नारा सबै ठाउँमा छरिएका छन् । तैपनि शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुनचाहिं अझै छाडेको छैन । कतिसम्म गैरजिम्मेवार हुँदोरहेछ त नेपालीको स्वभाव र बानी । शिक्षकलाई तनावमा राखेर विद्यार्थीको पढाई अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा त जान्नपर्ने हो नि । नितान्त शैक्षिक मुद्धामा सम्बन्धित पक्षले चासो र सरोकार नदेखाएपछि स्वमय् विद्यार्थीहरुले नै विद्यार्थीका लागि गरेको आन्दोलनलाई केहि हदसम्म जायज मान्न सकिएला । तर यहाँ त सामान्य मुद्धादेखि राजनीतिक सवालसम्म विद्यार्थीको पढाइलाई प्रभावित हुनेगरि आन्दोलनको उठान गरिन्छ । अझैपनि भर्खरै फक्रिन लागका कोपिलाहरुलाई चुँडालेर फाल्ने प्रयास कतिञ्जेल गर्ने ?
विद्यालय बन्द हुँदा र शिक्षकलाई तनावमा राख्दा विद्यार्थी नयाँ कुरा जान्नबाट वञ्चित हुन्छ । विद्यालयमा बन्द हड्तालबाट हुने दुरगामी असरको भयावह परिणामको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । सरोकारवालाहरु सबै मिलेर विद्यालय शान्तिक्षेत्र हो भन्ने प्रत्याभुति नदिलाएसम्म विद्यालय बन्द भइनै रहन्छ । विद्यार्थी संगठनहरुले कलिला विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर राजनीति गरिरहन्छन् । अनि राजनीति गर्नेका कुरालाई कति पत्याउने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाउन र घुर्की लगाउन लगातार शैक्षिक क्षेत्रलाई तारो बनाइरहन्छन् । अब फेरि व्यवस्थापन समितिका नाममा विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउने प्रयत्न गरिंदैछ । यो बालकुमारीमा मात्र होइन, धेरैजसो स्कुलमा देखिन्छ । यसपालि गुरुपूर्णिमाका दिन बालकुमारीका गुरु–गुरुआमाहरु तनावमा परे । आदर गर्नुपर्ने दिन अनादर बेहोर्नुप¥यो । प्रशासन टुलुटुलु हेर्न बाहे केही जान्दैन । जब राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भइदिन्छ, जायज नाजायज माग राख्नेहरुलाई समेत विद्यालय र विद्यार्थी मसला बन्नुपर्नेछ । यसैले व्यवस्थापन समितिका नाममा बालकुमारीमा देखिएको विवाद साम्य पार्न सबै राजनीतिक दलहरुले ‘हाम्रा’ भन्दा पनि ‘राम्रा’ मान्छे खोज्न जोड दिनैपर्छ । अन्त्यमा असल खराब जे भएपनि सुनेको, देखेको र पढेको सबै विषयका स्रोतहरु हाम्रा गुरु–गुरुआमाहरु हुन् । हामी जे हौं, हामीले पढेका विद्यालय र तिनै गुरु–गुरुआमाका परिणाम हुन् । यो जीवनचक्र जस्तै हो । पुस्तौपुस्तासम्म यो सत्य रहिरहन्छ । यसैले सबै विद्यालयका सबै विद्यार्थीले यो कुरालाई मनन गरी आफ्ना परिणामका स्रोतहरुलाई नमन गर्नका लागि पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनु जरुरी छ । आउनुस्, यसैका लागि एकाकार बनौं ।
२०७० साउन १५ गते मंगलबार चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’बाट
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 1:49 PM 1 comment: Links to this post
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 1:30 PM 1 comment: Links to this post
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 10:07 PM 1 comment: Links to this post
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 11:28 PM 1 comment: Links to this post
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 4:13 PM 1 comment: Links to this post
शिक्षकको पेशा ः राजनीति कि शिक्षण ?
करिब १२ वर्षअघि शिक्षण पेशा छाडेका सल्यानका रत्न ओली यतिबेला एमाओवादी निकट ‘अखिल नेपाल शिक्षक संगठन’ का केन्द्रीय अध्यक्ष भएका छन् । गत हप्ता सम्पन्न संगठनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित भए । शिक्षण पेशामै रहेका बखत तत्कालीन माओवादीको ‘जनयुद्ध’ लाई मन पराएर उनी युद्धतिरै लागे । युद्धमा लागेपछि पेशामा रहने कुरै भएन । एउटा शिक्षकको पेशा ‘युद्ध’ बन्यो । भएको ‘माष्टरी जागिर’ भन्दा अहिले उनलाई एमाओवादीको ‘राजनीतिक जागिर’ प्यारो छ । एमाओवादीको आडमा उनी अझैपनि ‘शिक्षक राजनीति’ गरिरहेका छन् । शिक्षकको नेता हुन त विद्यालयमा गएर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने हो । अनि आफू कार्यरत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका विविध समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवालाकहाँ नैतिक दवाव दिनुपर्ने दायित्व ‘शिक्षक नेता’को हुनुपर्ने हो । आफूले पढाउने स्कूल नै देशमा कतै नभएपछि उनीबाट यो कुरा कसरी सम्भव पनि भएन । यद्दपि देशकै ठूलो पार्टी एमाओवादी निकट यो शिक्षक संगठनमा भने अरुका भन्दा धेरै शिक्षक सदस्य भएको दावी गरिएपनि नेता चाहिँे ‘गैरशिक्षक’ नै हुँदोरहेछ ।
देशमा गणतन्त्र स्थापना भईसकेपछि माओवादीको ‘जनयुद्ध’ लाई यतिबेला राजनीतिक सम्मान दिइएको छ । यो राजनीतिक सम्मान पाएको पनि सात वर्ष भईसक्यो । तर युद्धकालीन अवस्थामा जागिर छाडेका शिक्षकले चाहने हो भने देशका कुनै पनि विद्यालयमा ‘जागिरे’ बन्न सक्थे । यद्दपि मनैदेखि उनीहरुलाई त्यसपछिको बाँकि जीवनमा शिक्षक बन्ने मनोकांक्षा जागेन । अनि विद्यार्थीलाई नपढाईन र स्कूल नगइकन ‘शिक्षकको नेता’ बन्न पाएपछि किन दुःख गरिरहनुप¥यो र ?
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको अहिलेको सम्मेलनबाट दुई सय भन्दा बढिको केन्द्रीय समिति बनेको छ । १९ जना त पदाधिकारी नै छन् । तर यत्रो जम्बो केन्द्रीय पदाधिकारीमा हाल बहालवाला शिक्षकहरु चार जना मात्रै छन् । उपाध्यक्ष बनेका चितवनका जीवनाथ पराजुलीले स्कूल पढाइरहेका छन् । यसैगरि सचिव बनेका चितवनका पूर्ण दवाडी, लमजुङकी नानुमाया पराजुली र सिराहाका युगेश्वर रावत मात्रै बहालवाला शिक्षक हुन् । अरु सबै विद्यालयमा नगइ ‘शिक्षक नेता’ बनेकाहरु मात्र रहेछन् ।
माक्र्सवाद, माओवाद र लेनिनवादको विचारधारालाई मन पराएर पहिले ‘एमाओवादी’को सदस्यता भएपछि मात्रै अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको सदस्य बन्न पाइन्छ । अर्थात्, शिक्षक बन्नुभन्दा पनि ‘पार्टीको राजनीति’ उसको पहिलो शर्त हो । एमाओवादीबाट अलग भएर जन्मेको नेकपा–माओवादीलाई मन पराउने शिक्षकहरु पनि अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा आवद्ध छन् । तर दुवैको नाम एउटै भएपनि नेकपा–माओवादी निकट शिक्षक संगठनको अध्यक्ष भने गुणराज लोहनी हुन् । ०४६ साल ताका लोहनीले चितवनको नारायणी मावि पढाउँथे । करिब तीन वर्ष अस्थायी सेवामै शिक्षण पेशा अँगालिरहेका लोहनीलाई पनि पार्टी राजनीतिले तान्यो । यसपछि उनी कहिल्यै शिक्षक भएनन् । तैपनि उनी २४ वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा ‘शिक्षक नेता’ का रुपमा कहलिएका छन् । पार्टी राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व त कायम गरेका छन् नै । नपढाइकन शिक्षकको अध्यक्ष बन्ने पंक्तिमा उभ्याउन उनी सफल भइरहेका छन् ।
‘अखिल नेपाल शिक्षक संगठन’को विधानमा बहालवाला, पेशा छाड्न वाध्य पारिएका या पेशा निवृत्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरुले शिक्षक संगठनको सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्दपि शिक्षण पेशासंग कुनै न कुनै दिन जोडिएका सबैलाई सदस्यता दिने प्रावधान राखिए पनि यो कुरा ‘समाजपयोगी’ हुन नसक्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । भनिन्छ, अचानोको पीर खुकुरीलाई मात्र थाहा हुन्छ । यसैले कहिल्यै विद्यालय गएर नपढाउने शिक्षकले कसरी शिक्षकको समस्या थाहा पाउला ? देशको शैक्षिक स्थिति यस्तो रहेछ भनेर कहाँको कुरा उसले राज्यको निकायमा भन्न सक्छ ? नियमित विद्यालय गएर पढाउने शिक्षकलाई पो विद्यार्थी र शिक्षकको समस्या अनि आवश्यकता थाहा हुन्छ ।
‘जनयुद्ध’ लडेर आएको माओवादीका शिक्षकहरु त कुनै बेला युद्धकालीन अवस्थामा थिए । यसैले सेवाबाट हटिसकेपछि फेरि फेरि शिक्षक नै भएर विद्यालयमा जाने जाँगर गरेनन् भन्न सकिएला । अथवा ‘पढाउने मन त थियो’ राज्यले पुनवर्हाली गरेन भनेर राज्यलाई सराप गर्न सकिएला । तर माओवादी ‘जनयुद्ध’ नलडेका कांग्रेस–एमाले र अरु दल निकट शिक्षकका संघ÷संगठनका ‘शिक्षक नेता’ हरु समेत हाल बहालवाला शिक्षक छैनन् । कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीको शिक्षक दरवन्दी भएर पनि अझसम्म उनले पढाउने स्कूल छैन । अहिलेका अध्यक्ष केशव निरौलाको अवस्था पनि उही नै हो । उनीहरुका झोलामा स्कूल गएर विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षण सामग्री हुनुपर्ने हो । विडम्बना अहिले भर्खर गएर उनीहरुका झोला खानतलासी ग¥यो भने शिक्षण सामग्री होइन, कांग्रेसका प्रचार सामग्री भेटिन्छ । उनीहरुले पढाउने स्कूल कुन हो र पाठ्यसामग्री के छ भनेर सोध्यो उनीहरु आफै अक्क न बक्क हुन्छन् ।
एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको हालत पनि उस्तै छ । संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा ललितपुर बस्छन् । तर उनी स्कूल पढाउँदैनन् । शिक्षकहरुको साझा मोर्चा भनेर चिनिने नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीको अहिलेको व्यवसाय ‘शिक्षण’ होइन । तैपनि उनी शिक्षकका नेता बनेर टोपलिएका छन् । माओवादी, कांग्रेस, एमाले निकटका शिक्षकहरु मात्रै होइन, अरु दल निकटका शिक्षक नेताहरुको अवस्था पनि उही हो । यसरी ‘गैरशिक्षक’ हरुको बोलवाला र चलखेल उनीहरुकै दलनिकट शिक्षकहरुका लागि राजनीति गर्ने थलो बनिरहेको छ । पेशा गरिरहनेहरु ‘पेशाकर्मीका संस्था’ मा आवद्ध भए पो पेशाको पनि सम्मान रहन्छ । पेशाविहिनहरुले पेशाकर्मीको संस्था हाँके भने अरुका लागि लाजमर्दो हुँदोरहेछ । ‘आची गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज.....’ भनेजस्तै । शिक्षकले त आफ्नो पेशाको वकालत गर्नुपर्ने हो । पेशाको वकालत गर्नलाई शिक्षक नभइ हुँदैन । तर ‘दलगत राजनीति’ गर्नका लागि शिक्षकको नेता बन्नुपर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गइरहेको छ । यदि वास्तविक शिक्षकको आफ्नो पेशाकर्मी संस्थामा ‘पहुँच’ पुग्दैन भने शिक्षकका समस्या र आधुनिक शिक्षण पद्धति एवम् सिकाइको विकास कसरी सम्भव होला र ?
शिक्षा मन्त्रालयले गएको वैशाख ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन रोक लगायो । शिक्षकले दलको सदस्यता लिने प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘अनुशासनहीन काम’ भनेको छ । मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ–‘राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक पार्टीको पदाधिकारी वा सदस्य हुन मिल्दैन । यसबाट शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिमको पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिन्छ । यो कार्य शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरणको प्रतिकूल रहेको छ ।’ मन्त्रालयले यसो भनिरहँदा अर्कोतिर कोहि शिक्षक नपढाएरै राजनीति गरिरहेका छन् भने कसैले आफ्नो दरवन्दी भएर पनि ‘काज’ मिलाएर नपढाइकनै केन्द्रबाटै ‘पढाएवापत’ तलब भत्ता लिई राजनीति गरिरहेका छन् । यसको असर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुमाथि परिरहेको छ । शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनुलाई मात्र अन्यथा लिन सकिंदैन । तर शैक्षिक संघसंस्थाहरु राजनीतिक थलो बनिरहनु चाहिँ आपत्तिको विषय हो । शिक्षकले संघसंगठनको सदस्यता लिनुलाई पनि ‘स्वतन्त्र’ छाड्नुपर्छ । तर पेशाकर्मीको संस्थाले राजनीतिक पार्टीको भजनमण्डली बन्ने कुरालाई निरुत्साहित चाहिँ पार्नैपर्छ । अनि, शिक्षण पेशा गरिरहेकालाई मात्र ‘शिक्षक नेता’ बनाउनका लागि अब शिक्षकका हरेक संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसो गरियो भने शिक्षकका आवाज पेशागत मुद्धका रुपमा सम्बन्धित निकायमा पुग्छ । राम्रो शिक्षण पद्धतिको पनि विकास हुन्छ ।
अहिले राजनीतिक समूहसंग सङगठित नभई शिक्षण पेशामा बाँच्न गाह्रो परेकाले पनि शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीसंग सम्झैता गर्छन् । अन्तस्करणलाई वेवास्ता गर्छन् । अब भने एउटा राम्रो शिक्षकले आफूसम्बद्ध राजनीतिक समूहको नाराप्रति त्यो समूह आफैँ कति इमानदार छ भन्ने कुरामा घोत्लिएर सोच्नुपर्ने भएको छ । ठिकै छ, हरेक शिक्षकका विचार फरक हुनसक्छन् । राजनीति नराम्रो कुरा पनि होइन । राज्यको नीति नै राजनीति हो । तर विभिन्न विचार बोकेर नेता भएका शिक्षकले आ–आफ्ना विचार विद्यार्थीहरुलाई सिकाएर जरैदेखि रोज्न लगाएको पाइदैन । न यो कुरा राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संघसंगठनहरुले नै गर्छन् । अहिले त शिक्षक ‘तलब पाइन’ भनेर राजनीति गर्छ । विद्यार्थी ‘शुल्क बढि भयो’ या ‘निशुल्क शिक्षा’का नाममा राजनीति गर्छन् । अनि राजनीतिक दल लगायतका विभिन्न निकायका हड्ताल र बन्दमा पनि विद्यालय नै मारमा पर्छ । शिक्षकलाई पढाउन नपाए रमाइलो लाग्छ । विद्यार्थीलाई स्कूल जान नपाए आनन्द लाग्छ । यस्तो कुरामा पनि शिक्षक नेताले प्रष्ट धारणा राख्ने गरेको पाइदैन ।
३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था फाल्न शिक्षकहरुले राम्रै कसरत गरे । देशमा गणतन्त्र ल्याउन ‘जनयुद्ध’मा पनि लागे । पछिल्लो १९ दिने जनआन्दोलनका बलमा राजालाई फाल्न शिक्षकहरुको योगदान अमूल्य रह्यो । व्यवस्था परिवर्तनपछि आफ्नो लक्ष्य पु¥याउने निकायमा शिक्षकहरुका राजनीतिक दल पुगेका छन् । आफै त्यस दलको नेता भएका छन् । तै पनि शिक्षकहरु आफ्नो पेशामा ससम्मान फर्किन सकेनन् । अर्थात् , फर्किन चाहेनन् । राजनीतिक आवरणबाट उनीहरुले आफूलाई मुक्त गर्न सकेनन् । आफ्नो भूमिका र व्यवस्थाभित्रका राजनीतिक खेलाडीको अस्त्र हुने भूमिकाबीचको अन्तर बुझ्न सकेनन् । अझै पनि शिक्षकहरुले शिक्षालयलाई राजनीतिकरण गर्न जसरी प्रोत्साहित गरिरहेका छन्– यो ठूलो भूल हो । अब शिक्षकहरुले आफ्नो भूमिका बदल्न जरुरी छ । आफ्नो पेशाको सम्मानका लागि र पेशागत हकहितका लागि ‘गैरशिक्षक’ लाई नेतृत्वमा पठाउनु हुँदैन । राजनीतिक आवरणमा बढि क्रियाशिल देखिने शिक्षकले विद्यालयको शैक्षिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्दैन । यसो भएपछि आफ्नै शिक्षक साथीहरुको समस्यामा परिचित हुने त कुरै भएन । त्यहीमाथि ‘शिक्षक नेता’ भएका शिक्षण संस्थामा खस्किदो शैक्षिक परिणामले शिक्षकले अब आफ्नो पेशा राजनीति होइन, शिक्षण नै रोज्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ ।
२०७० असार ११ गते मंगलबारको चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’ बाट
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 4:29 PM 1 comment: Links to this post
Labels: आफ्नै लेख, राजनीति, समाज
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 9:51 PM 1 comment: Links to this post
माडीको घाउ : अब धेरै नचर्काऊ
आठ वर्षअघि जेठ २३ गते चितवन माडीस्थित बादरमुडे खोलामा माओवादीले एक यात्रुवाहक बसलाई ‘विद्युतीय धराप’मा पार्दा ३८ जनाको मृत्यू र ७२ जना घाइते भएपछि सो घटनाको सर्वत्र आलोचना भयोे । माओवादीले पनि सार्वजनिक रुपमै घटनाका सम्बन्धमा माफी माग्यो । प्रचण्डले पनि आफूले सो घटना थाहा पाएपछि आफूलाई तीन दिनसम्म खान र सुत्न मन नलागेको बताउदै माडीमै पुगेर त्यहा“का सर्वसाधारणसंग माफी माग्ने कसम खाए ।
माओवादी जनताका सामु खाएको कसम नौ वर्ष लाग्दा समेत पुरा नभएपछि घटनाका पीडितहरुले गएको विहीबार यसलाई बाँदरमुडेमै पुगेर ‘कालो दिन’ को रुपमा सम्झिए । माओवादीले घटना घटाएको दिन त माडीवासीलाई यसै पीडा हुने भैहाल्यो । नौ वर्षे पीडादायी वर्षहरु उनीहरुका लागि झनै जोखिमपूर्ण रह्यो । उतिबेला घाइते भएकामध्ये ३ जना पनि पछि मृत्युको सूचीमा थपिए । घाइतेको उपचार खर्चले नेटो काट्यो । अभिभावक गुमेपछि तिनका सन्तानले उचित शिक्षादिक्षा र लालनपोषण पाएनन् । घटनाले दिएको पीडा सम्झेर माओवादीलाई सराप्नुबाहेक उनीहरुसंग विकल्प पनि भएन । राहत दिन्छन् भनेर आशा गर्नेहरुलाई माओवादी नेताहरुले भाषण मात्रै दिएर फर्काए । साना बालबच्चाको मुखको दूध बेचेर घाइतेले उपचार गर्नुप¥यो । न्याय र राहतको पर्खाइमा बसेकालाई पीडामाथि पीडा थपियो । पीडाको घाउ जति फाल्न खोजेपनि उप्किएन । यसको खाका रहिनै रह्यो । राम्रोसंग उपचार गर्न पाए पीडाको घाउ पक्कै सुक्थ्यो । मर्ने त मरेर गइहाले । मृतक परिवारलाई झनै यसको घाउ बल्झिरह्यो । घाइतेको पीडा झन् कसरी कम हुन सक्थ्यो होला र ?
घटना घटेको वर्षौ भइसक्दा पनि घटनाको प्रकृति र पछिको परिवेशले सामान्य मान्छेको त अझै पनि आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ । घटनाका पीडितहरुले मृतकहरुको सम्झनामा ‘कालो दिन’ मनाउँदा काठमाडौंबाट पत्रकार कनकमणि दीक्षित पनि बाँदुरमुडे पुगेका थिए । नौ वर्षअघिको पीडाको घाउ थाम्न नकसेर आँशु झारेका पीडितका माझ उनले भने,‘ माओवादीले मान्छेको मासु मात्रै चिन्दा रैछन् । मान्छेको मासु चिन्नेले उनीहरुको आँशु चिन्न सक्दैनन् भन्थे । हो रैछ ।’ हुन पनि मान्छे मार्न उनीहरुलाई उतिबेला केहि जस्तो लागेन । बाँदरमुडेमा यात्रुवाहक वसलाई धरापमा पारि मान्छे मार्दा प्रयोग गरिएको ‘विद्युतीय धराप’ अन्जान र अज्ञानतावश भएको थिएन । घटनास्थलबाट ३०० मिटर परसम्म तार लगि ‘स्वीच अन’ गरेर बस र बसभित्रका मान्छेलाई उनीहरुले छियाछिया पारेका थिए । भूलवश धराप विछ्याएपनि ३०० मिटर परको रुखबाट ‘स्वीच अन’ नगरेका भए यो घटना घट्ने थिएन । किनभने उनीहरुले बसमाथि छतभरि आफ्नै छिमेकी र आम सर्वसाधारणलाई देखेका थिए । यस्तो जघन्य अपराधको जति नै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । तर घटनाका दोषीलाई सार्वजनिक गर्ने र उनीहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइ पीडितलाई ‘न्याय’ दिने माओवादी प्रतिवद्धता समयक्रमसंगै हावादारी सावित हुँदै गइरहेको छ । उल्टो सो घटनामा संलग्न भएकाहरु माडी क्षेत्रमै छाती फुलाएर हिँडेका छन् । माओवादीकै बल र सिफारिसमा जिल्लाकै सार्वजनिक चासो र सरोकार राख्ने ठाउँको ‘उच्च ओहदा’मा कुर्सीै जमाएर बसेका छन् । आफ्नै आँखा अगाडि तेत्रो घटना घटाउनेलाई आठ वर्षसम्म माओवादीले ‘अन्नपानी दिएर पालेको’ टुलुटुलु हेर्न परेपछि बाँदरमुडे पीडितलाई चित्त बुझ्ने कुरो पनि भएन । माओवादीले बँदरमुडे घटनामा आफ्ना कार्यकर्ताहरु सुजन कुमाल(सुजन), चण्डीका पौडेल(साहस), अनक मगर(किसन) र शिव रेग्मी(हर्क)को संलग्नता रहेकोे स्वीकारेको छ । घटनापछि उपचारका क्रममा अधिकांश घाइतेको घरखेत सकिएको छ । कतिपयले बालबालिकाले पढाई छाडेका छन् । कति युवा ऋण तिर्न पढाई छाडेर विदेश हिंडिसकेको अवस्था छ । तर यस्ता कुरालाई न राज्यले सम्बोधन ग¥यो, न त माओवादीले नै ।
माडीमा माओवादीले तेत्रो घटना घटाउँदा पनि अन्ततः माडीवासीले माओवादीलाई नै मन पराइदिए । माओवादीकै सहयोगबाट अमिक शेरचन त्यस क्षेत्रबाट संविधान सभामा निर्वाचित भए । पछि जनमोर्चा र माओवादी एकिकरण भएपछि एमाओवादी जन्म्यो । अमिक शेरचन एमाओवादीका सभासद् भए । उतिबेला माडी घटनाको चर्को विरोध गरेको जनमोर्चाले पनि एमाओवादीमा विलय भएपछि पीडितका पक्षका बोल्न चाहेन । पीडितका कुरा भन्दा पार्टीकै कुरा ठिक लाग्यो । पार्टीकेन्द्रको ह्वीपमा कार्यकर्ता लागे । घटना घट्दा अधिकांश जनमोर्चाका कार्यकर्ता पनि थिए । पार्टी एकिकरण भएपछि पीडितहरु पनि एमाओवादीमै लागे । कतै राजनीतिक आस्था नभएकाहरु पनि ‘कुनैबेला पोलेको आगोले भविष्यमा सेक्छ’ भन्दै माओवादी बने । तर पोलेको मात्रै भए त माओवादीको आगोले सेक्थ्यो होला । ढडाइसकेको आगोले सेक्न सकेन । आगो होइन, उनीहरुलाई मलम चाहियो । यद्दपि त्यो मलम अहिलेसम्म माओवादीले पीडितलाई चित्त बुझ्ने गरी लगाइदिन सकेको छैन । राज्य संयन्त्र माओवादीको चंगुलमा भइसकेपछि उसबाट अपेक्षा गर्नुपनि बेकार भयो । माओवादी बाहेकका कांग्रेस एमाले र अरु पार्टीका मान्छेहरु पनि सधैं पीडितका पछि किन लाग्थे ? वर्षको एक दिन जेठ २३ गते ‘गोहीको आँशु’ चुहाइदिने बाहेक उनीहरुले पनि केही गर्न सकेनन् । विडम्बना त्यही ‘गोहीको आँशु’ चुहाउन तत्कालीन जनमोर्चा र माओवादीका मान्छेहरु गएको जेठ २३ गते बाँदरमुडे पुग्ने आँट गर्न सकेनन् । यसले संकेत ग¥यो,– ‘मान्छेको मासु चिन्नेले उसको आँशु चिन्न सक्दोरहेनछ ।’
माडी घटनाका पीडितका नाममा समर्थन जनाएर आफ्ना मतदाता बढ्ने भए अन्य राजनीतिक पार्टीले पीडितका पक्षमा राहत र न्यायको आवाज बोलिरहने थिए होलान्, तर अवस्था पीडितका पक्षमा बोल्ने रहेन । माडी घटना जस्तै अन्य यस्तै दर्दनाक घटनाका पीडितलाई न्याय दिन त केन्द्रमै ‘न्याय र राहत’ को प्याकेज ल्याउनुपथ्र्यो । तर सबै कांग्रेसका सुशील कोइरालादेखि एमालेका झलनाथ खनालसम्मका नेताहरु एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंगै नतमस्तक बन्दै लम्पसार परिरहेका छन् ।
माओवादीले माडीमा घटना घटाइसकेपछि पहिलोपटक २०६३ कात्तिक ३ गते चितवनको फूलवारीमा प्रचण्ड, बादल र बाबुराम भट्टराईले पीडितहरुसंग प्रत्यक्ष कुराकानी गरे । वरीपरी माओवादीले भिरेका बन्दुकको कुन्दाले घेरेर गरिएको वार्तामा प्रचण्डले घटना पीडितलाई मात्रै होइन, सिंगो माडीलाई नै लाभ हुने खालको ‘राहत प्याकेज’ दिने भनेको कुरा पीडित समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले अझै सम्झन्छन् । माडीमा जान असुरक्षाको कारण देखाउ“दै प्रचण्डले उतिबेला माडी जाने कष्ट उठाएनन्, बरु पचास किलोमिटर टाढाबाट उतिबेला माडीवासीहरुलाई बोलाएका थिए । पीडितहरुले आफूले राखेका माग र पोखेका पीडाका साक्षीका रुपमा जिल्लाका सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारवादीलाई वार्तामा संगै राख्न खोजेपनि माओवादीले यो अवसर पनि दिएनन् । पीडितहरुलाई यो अनुमति नदिंदा माडी घटनाका पीडितहरुप्रति माओवादी अझ गम्भीर हुन सकेनन् । माओवादीले सो भेटघाटमा सञ्चारकर्मीलाई बस्नमात्र होइन, तस्विर खिच्न र छायांकन गर्न समेत दिएका थिएनन् । घाइतेसंगै एकैसाथ वार्तास्थल पुगेपनि माओवादीले घाइतेलाई वार्ता हुनु अघिसम्म पनि अलग्ग्ै राखेका थिए । माओवादीले भनेको सो प्याकेज प्रोग्राममा शिक्षा, राहत र विकासका सवै कुराहरु समेटिएका थिए । पीडितहरुसंग गरिएको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले उतिबेला भनेका थिए,“हामीले माडीलाई सो दर्दनाक घटनासंग मात्रै जोड्दैनौं । अब पीडित मात्रै होइन, समग्र माडीवासीको उत्थानका लागि माओवादी त्यहा“ नया“ कार्यक्रम लिएर जान्छ । माडीलाई अब नया“ माडीको रुपमा विकास गरिन्छ ।’
फूलवारीको ‘राहत प्याकेज’ घोषणापछि प्रचण्ड एकैपटक गएको फागुनमा माडी महोत्सव उद्घाटन गर्न झुल्किए । महोत्वस उद्घाटन गर्न आएका प्रचण्ड पीडितहरुसंग डराए । प्रहरी प्रशासनले प्रचण्डको असुरक्षा हुने बुझ्यो । उद्घाटन अवधिभर माडी घटनाबाट पीडित बनेका कृष्ण अधिकारीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले ‘तपाईसंग जरुरी सल्लाह गर्नुछ’ भनि बोलाएर प्रहरी कार्यालयमै राख्यो । जब प्रचण्ड माडी महोत्सवको उद्घाटन मन्तव्य दिएर हेलिकप्टर चढेर गए, अनि बल्ल कृष्ण अधिकारीलाई पनि छाडियो । सकेसम्म ठूलो आर्थिक प्रलोभन र सांसद बनाउने जस्ता विभिन्न प्रलोभन देखाएर माओवादीले आफूलाई किन्न खोेजेको तर नसकेपछि आफ्नो विरोधमा स्थानीय माओवादीहरु समेत लागेर ‘जतिबेला जे पनि हुनसक्ने’ भन्दै आफूलाई पीडाभाथि झन् पीडा थपिदिएको अधिकारीको भनाई छ । यस्ता कुरालाई माओवादीले बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । माडी महोत्सवमा आएका बेला प्रचण्डले सरकारलाई भनेर पीडितका नाममा ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न लगाएको बताएका थिए । यो रकम पीडितले आफूखुशी खर्च गर्न पाउने भनिएको थियो । प्रचण्डको यो कुरा हावादारी रहेको पीडितहरुले तब थाहा पाए, जतिबेला ‘द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम’का नाममा शान्ति मन्त्रालयले आफू मातहत रहने गरी ‘वरीपरी तारवार लगाएर पैसा लिन बोलाएको’ थियो । पीडितहरु भन्छन्,‘ विजुली नभएको माडीमा कोल्ड स्टोरेज जस्ता आयोजनाको के काम ?’
माडी घटना दर्दनाक हो, यसमा दुइमत छैन । दलगत स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउनु राम्रो पनि होइन । माओवादीका पछिल्ला व्यवहारले पनि माडीवासीको न्यायलाई माओवादीले पैसाले किन्न खोजेको बुभिन्छ । पीडितलाई न्याय र राहत संगसंगै दिने वातावरण नभएसम्म उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सकिने ठाउँ देखिदैन । यसैले बिनाकसुर माओवादीबाट यो नियति भोग्न बाध्य बनाइएका अभागी गाउ“लेहरुलाई आश्वस्त पार्न माओवादीले अझै पनि आफ्नो संगठनभित्रको दण्डहिनता निरुत्साहित गर्नुपर्ने र कारवाहीलाई प्रमाणित नगर्दासम्म यो घाउ सधैं आलै भएर रहन्छ । पीडितका जायज मागलाई सम्बोधन गरिदिए माओवादीले बाँदरमुडेको आगामी वार्षिकोत्सवलाई फेरि ‘कालो दिन’का रुपमा मनाउने थिएनन् । अनि पीडाको घाउ पनि सुक्दै जाने थियो ।
२०७० जेठ २८ गते मंगलबारको चितवन पोष्ट दैनिकबाट
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 2:36 PM2comments: Links to this post
श्रीलङ्का आक्रमणः विध्वंसका तस्बिर